I-Amazon Prime ngoku ifika eSpain, ihambisa ngeyure e-1 eMadrid | IPhone iindaba
I-Amazon Prime ngoku ifika eSpain, ihambisa ngeyure e-1 eMadrid
I-Amazon Prime ngoku yinkonzo esele ifumaneka kwizixeko ezininzi kwihlabathi liphela ethi ithande abasebenzisi beAmazon ukusuka kumzuzu wokuqala. Ukuba i-24 / 48h yothutho olukhawulezileyo ibonakele kakhulu, ngoku IAmazon Prime ngoku ifika eMadrid, inkonzo eya kuzisa imveliso yakho ngaphantsi kweeyure ezi-2. Ndiyabulela kule nkonzo intsha, ukuthenga kwiAmazon kuya kufana nokuthenga evenkileni, siya konga ixesha esinokuchitha ngalo ukuqala imoto, ukufumana indawo yokupaka kunye nokuhamba ezivenkileni ukufumana elona xabiso liphezulu, samkela iAmazon Prime Ngoku eSpain.
Ayigcini ngokuhlala eMadrid, kodwa ikwandisa kwiindawo ezingama-21 ezongezelelweyo. Ukuhanjiswa embindini kweMadrid kuyakwenziwa ngeebhayisikile zombane kwaye simahla ngenkonzo yeAmazon Premium. Kweminye imimandla, iya kwenziwa kusetyenziswa inkonzo yesiqhelo yezothutho kwaye iya kwahluka kwi € 5,90 ngokwemigangatho engaphantsi kweyure enye, okanye simahla ngeAmazon Premium ukuba ixesha lijikeleze iiyure ezimbini. Linyathelo elinomdla kakhulu lelo leAmazon Prime Ngoku, esele ifumene umdla wabasebenzisi kunye nabathengisi beqonga.
Njengoko besesitshilo, ukusebenzisa le nkonzo kufuneka ube ngumsebenzisi weAmazon Premium, eSpain ibiza i-19,95 ngonyaka, ubuncinci okwangoku, nangona inganyuka ngexabiso kungekudala njengoko sele isenzile kwiindawo ezininzi zehlabathi. Yenye nje yeenzuzo ekufuneka sizenze iNkulumbuso, kunye nokufikelela kwangaphambili kwizibonelelo kunye nokuthunyelwa okuqhelekileyo simahla simahla. Le nkonzo iya kutyhala abasebenzisi abaninzi kubhaliso lwePremiyamu ngaphandle kokucinga ngayo, kuba ukuthenga kuya kuba mnandi njengaxa kusenziwa ekhaya. UJeff Bezos kunye nenkampani yakhe soze bayeke ukusothusa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Amazon Prime ngoku ifika eSpain, ihambisa ngeyure e-1 eMadrid
Kuphela yi-9% yabasebenzisi be-iPhone abaya kuthenga i-iPhone 7
Emva kwezilwanyana, i-Shot ezimbini ezintsha kwiintengiso ze-iPhone zifika zibonisa amandla ekhamera kwii-iPhone 6s